१५ सयमै १५ जीबी, १५ एमबीपीएसको स्पिड | Bishow Nath Kharel
१५ सयमै १५ जीबी, १५ एमबीपीएसको स्पिड
Posted on February 11, 2013 by bishownath
प्रस्तुति: कारोबार संवाददाता
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, क्लासिक टेक प्रालि
स्टलमा अवलोकनकर्ताको आगमन देखेर कस्तो लागेको छ ?
‘मिदास क्यान इन्फोटेक २०१३’मा अवलोकनकर्ताको आगमन देखेर अत्यन्तै उत्साह र हौसला थपिएको छ । मेला सुरु भएको दुई दिन भयो, वास्तवमै राम्रो भएको छ । इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको समस्या के हो, कस्ता–कस्ता माग छन् र उनीहरूले कस्तो शुल्कमा कस्तो सेवा खोजिरहेका छन् भन्ने कुरा जान्नकै लागि म आफैं पूरै दिन स्टलमै बसिरहेको हुन्छु । वायरलेस तथा अप्टिकल फाइबरमा ग्राहकको माग के हो भन्नेबारे मैले दुई दिनमै धेरै बुझ्ने अवसर पाएको छु । भीड हुने स्टलमध्ये क्लासिक टेक पनि एक हो ।
इन्फोटेकमा के नयाँ अफर लिएर आउनुभएको छ ?
हामीले फाइबरमा ‘सीटी ४५’ र वायरलेसमा ‘सीटी २११’ गरी दुई किसीमका इन्टरनेट प्याकेज ल्याएका छौं । ‘सीटी ४५’ अन्तर्गत ‘फाइबर टु होम’ नारा दिई मासिक १५ सय रुपैयाँमा १५ गिगाबाइट्स (जीबी), १५ मेगाबाइट्स (एमबी) पर सेकेन्डको स्पिडमा इन्टरनेट सेवा दिनेछौं । अहिलेसम्म अप्टिकल फाइबरबाट यति सस्तो र उच्च गतिमा इन्टरनेट उपलब्ध गराउने हामी नै पहिलो इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनी हौं । वायरलेसमा मासिक १ हजार रुपैयाँमा दुई एमबी पर सकेन्डको २० जीबी डाटा डाउनलोड गर्न सकिनेछ ।
वाईफाईमा के सुविधा दिँदै हुनुहन्छ ?
वाईफाई ग्राहकका लागि ५ सय रुपैयाँमा ५ सय १२ एमबीपीएस स्पिडको वाईफाई सेवासमेत सञ्चालन गरेका छौं । सोही मूल्यमा यसअघि २५६ एमबीपीएस स्पिडमा उपलब्ध थियो । नयाँ ग्राहकले मात्र नभई क्लासिकका पुराना ग्राहकले समेत बुधबारबाट ५० प्रतिशत बढी स्पिड क्षमताको इन्टरनेट सेवा पाउनेछन् । साथै, कम्पनीले न्यूनतम ५ सय १२ एमबीपीएसको स्पिडमा सेवा प्रदान गर्नेछौं ।
हामीले ग्राहकलाई उपयुक्त शुल्कमा इन्टरनेट सेवा दिइरहेका छौं । यसलाई कसरी भरपर्दाे र गुणस्तरीय बनाउने भन्ने विषयमा अनुसन्धानको पाटोलाई पनि अगाडि बढाएका छौं । गुणस्तरीय सेवा दिनकै लागि ठाउँ–ठाउँमा बीटीएस थप्ने र अपग्रेड गर्ने काम भएको छ । ग्राहकले चाहेको किन्नसक्ने इन्टरनेट सेवामा गुणस्तर कायम राख्न कम्पनी प्रतिबद्ध छ ।
ग्राहक संख्या कति छ ?
अहिलेसम्म १० हजार भन्दा धेरै ग्राहक भइसकेका छन् । जति पनि ग्राहक छन् कर्पाेरेट र ठूला आकारका ग्राहक हुन् । क्यान इन्फोटेकमा ग्राहकको चासोलाई देख्दा ५ हजार ग्राहक थप हुने अपेक्षा छ । अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दा दुःखी हुनुपर्ने अवस्था छैन । अब हामीले झनै मार्जिन कम राख्नेछौं र हालसम्म हामीसँग आबद्ध ग्राहकलाई सिस्टम अपग्रेड गरी उच्च गतिको इन्टरनेट दिने तयारी गरिरहेका छौं । सन् २०१३ को अन्त्यसम्ममा राजधानीबाहिर पोखरा र विराटनगरमा क्लासिकले इन्टरनेट सेवा पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । सरकारले इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई पनि फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराएमा ग्राहकले अझ गुणस्तरीय सेवा दिन सकिनेछ ।